Nagu Saabsan - Xuzhou Chuancheng Glass Products Co., Ltd.
Xuzhou Chuancheng Glassware Co., LTD.is waa shirkad wax soo saareysa oo ku takhasustay farsamada wax soo saarka dhalada galaaska, tikniyoolajiyad sare, badeecooyin galaas sare leh. Shirkadda leh biyo ku habboon, gaadiid dhulka iyo hawada ah, waxay u dhowdahay dekedda Lianyungang. Waxaan leenahay 5 khadadka wax soosaarka otomaatiga ah iyo 20 khad aan dabiici ahayn, kuwaas oo soo saari kara 2.8 milyan oo dhalo maalin kasta. Shaqaalahayaga hadda jira ka badan waa 500, oo ay ku jiraan 28 shaqaale farsamo sare ah iyo 15 kormeer oo tayo leh. Shirkaddayadu marwalba waxay la socotaa adeegga, shaqo daacadnimo leh, Sii wad hagaajinta, Tayada koowaad, tayada macaamiisha '.
Warshaddeenna waxay soo saartaa noocyo badan oo waaweyn
Annaga oo adeegsanayna alaab tayo sare leh oo dhammeystiran, nidaam maareyn tayo saynis ah, waxaan horey u dhisnay xiriir ganacsi oo aan la leenahay macaamiil badan oo gudaha ah iyo shisheeye Daacadnimo weyn, xoogga shirkadda iyo tayada waxsoosaarka.
Maxaa loo doortaa Xuzhou Chuancheng Glassware Co., LTD.
warshad ur waxay soo saartaa in kabadan 800 nooc oo waaweyn: dhalo malaas, dhalada macaanka, dhalada dhalada, dhalada soy, dhalada khal, dhalada saliidda, dhalada saliidda, dhalada khamriga, dhalada cabitaanka, dhalada qasacadaysan, dhalada buufin, xawaash dhalada, dhalada khamriga miraha, dhalada khamriga caafimaadka, dhalada cabitaanka, dhalada daawada, dhalada qaxwada, koob, dhalada, dhalada xakamaynta, laambadda galaaska, dhalada galaaska, koobka gacanta, biyo. Koob, dhalada dareeraha ah ee afka laga qaato, dhalada shaaha miraha, dhalada khamriga, dhalada maraqa yaanyo, dhalada khamriga bariiska, dhalada qurxinta, dhalada saliidaha, dhalada saliida dabaysha, dhalada kareemka, dhalada dhaqanka iyo wixii la mid ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ka shaqeynta qotada dheer ee wax soo saarka dhalada sida barafaynta, buufin, daabac xariir, dubista, xaraashka, dhoobada dhoobada, iwm.